Mid kamid ah Ardayda oo lagu magacaabo Cabdikariim Xuseen Maxamed, ayaa waraysi uu bixiyay ku sheegay inay soo wajahdsay xaalad adag oo u baahan in wax laga qabto.
Xuseen oo ku sugan Magaalada Islamabad, ayaa tilmaamay in lagusoo rogay lacago dheeri ah iyo daahinta fiisayaasha dalkaas, taasoo uu xusay inay ka simanyihiin Ardayda Somalia, halka kuwa Puntland u dheertahay haybsoon ku aadan in il gooni ah lagu eego.
Wuxuu sheegay inay dhowr jeer u tageen safiir Almakhzoumi, balse jawaabtu noqotay in la xiro wakiilkii ay dirsadeen.
Ardaygan ayaa intaas ku daray in cabashadooda u gudbiyeen dowladda Pakistan, balse lagu wargaliyay in dhibaatadan wax ka qabato dowladda Somalia.
Lama oga sababta arrintaan loogu cadaadinayo Ardayda Somaliyeed xilli la sheegay in waxyaabo badan oo lacag la’aan lagu siin jiray Cilmi doonayaasha Somalid lacag la’aan iminka laga dhigay khidmad taasoo xitaa mararka qaar qaata helisteedu waqti dheer.
Dadka Somaliyeed ee waddankaas jooga ayaa u badan Arday wax ka barta jaamacadaha Pakistan.
Almakhzoumi, ayaa horay u ahayd Safiirkii u joogay Somalia waddanka Ciraaq, balse muddo ka hor ayaa loo wareejiyay Pakistan.
​Ra'isal Wasaaraha Somalia oo la dar-daarmay Ardayda Jaamacadaha Dalka
MUQDISHU, Somalia- Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Somalia Xasan Cali Kheyre, ayaa boqolaal ardey oo isaga kala yimid Jaamacadaha dalka, kula hadlay Jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdishu, wuxuna kula dar-daarmay in wadajir loogu istaago sidii looga sha ...
Xoghaye Boris oo la kulmay qaar kamid ah Madaxda maamullada Somalia
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Ingiriiska oo Booqasho qarsoodi ah ku yimid Muqdishu
​Farmaajo oo waraaqaha Aqoonsiga ka guddoomay safiirka Cusub ee Britain
​Taliban iyo IS oo sheegtay qarax lagu dilay 73 ruux dalka Pakistan
​Pakistan: Xuska maalinta Jacaylka oo la diiday